Sekuchazeke no-R Kelly ngomlisa waseThekwini ocula izingoma zakhe | News24
Sekuchazeke no-R Kelly ngomlisa waseThekwini ocula izingoma zakhe
Johannesburg – Umlisa wakuleli osezakhele udumo ngokucula izingoma zika-R Kelly usechaze ngisho naso iqubo isihlabani somculi waseMelika azenza sona, u-R- Kelly.
UThandinkosi Mahlalempini nosedume ngelika-“R Kelly waseMzansi”, ungowokuzalwa KwaDabeka esigcemeni sakwa-A, entshonalanga neTheku.
Leli bhungu lisanda kumenywa ohlelweni iVuka Mzansi Breakfast Show (VMBS) kuKhozi FM nalapho ekhiphe khona ingonyuluka ngokuthi ubesehlala emgwaqeni futhi edla izidakamizwa nokuyinto athi yamulimaza kakhulu empilweni njengoba ethi wayiqala esemncane kakhulu.
UMahlalempini utshele umsakazi woKhozi FM, uSipho ‘DJ Sgqemeza’ Mbatha, ukuthi umculo wawuqala esontweni njengoba ethi nobaba wakhe wayengumfundisi.
Ngaphezu kwalokho leli bhungu elizichaza njengomuntu onekhono elihle lokubhala izingoma liphinde libe nengoma elithi layibhala sakudlala nje lingagxilile ngenxa yokuthi lalisacwile kakhulu ezidakamizweni. Le ngoma isihloko sithi What a beautiful day kanti isike yadlala nasemsakazweni uKhozi FM.
Manje uMahlalenkosini usedume cishe umhlaba wonke ngemuva kokuqoshwa eserenki yamatekisi ecula enye yezingoma zika-R Kelly nesihloko sithi Bad Man, nokuyinto eze yathatha ngisho amehlo akhe u-R Kelly imbala. U-R Kelly uzifakele ngokwakhe i-video yaleli bhungu ku-Instragram wakhe.
Zibonele le-video yaMahlalempini ngezansi kanjalo neziqeshana zengxoxo yakhe no-DJ Sgqemeza:
This weeks #FANFEATUREMONDAY travels all the way to Durban, South Africa and this fans rendition of #BadMan - I love how universal music is.